Editor maimaim-poana Lightroom Online
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ampidino ny Lightroom Online
Ity fitaovana an-tserasera ity dia noforonina ho an'ny mpaka sary / retoucher matihanina ary a safidy Lightroom maimaim-poana. Ampiasao ity Editor ity raha misy fanitsiana loko lalina na teboka misy sarontava, fiolahana ary sivana. Esory ny tsy fahalavorarian'ny hoditra madinidinika amin'ny alàlan'ny borosy mahazatra ary asio gradient malamalama ao anaty kitiho iray. Andramo ity fitaovana tsotra ity alohan'ny hividianana Adobe Lightroom amin'ny Internet.
Fanoloana ny Lightroom Online ve izany?
Tsia, ity mpamoaka sary maimaimpoana dia natao hanombohana famoronana, izay mila manao fanitsiana loko ifotony sy famerenana hoditra amin'ny tarehy semi-mandeha ho azy.
Afaka manao fanitsiana loko matihanina ve aho?
Azonao atao ny manitsy ny lokon'ny loko amin'ny maska, mampiditra sivana ary manitsy ny loko amin'ny fiolahana, ary koa manala ny mony kely, ny mena ary ny lesoka hafa amin'ny hoditra. Na izany aza, raha manomana sary ho an'ny famoahana na fanontana ianao, dia ampirisihinay fanitsiana loko ivelany ho an'ny manam-pahaizana.
Misy RAW fakantsary namboarina ve?
Tsia, ity fanoloana Lightroom Online ity dia tsy misy ny maody fakantsary RAW izay misy ao Adobe Photoshop.
Azoko atao ve ny mametraka plug-in an'ny antoko fahatelo?
Eny, ity fanoloana an-tserasera Lightroom ity dia mamela ny fametrahana plug-in an'ny antoko fahatelo, ao anatin'izany Borosy Photoshop ary na dia Photoshop hetsika. Fa tsara ny manamarika fa tsy afaka manafatra ianao Preset an'ny Lightroom avy amin'ny biraon'ny Lightroom, satria tsy manohana amin'ny endrika XMP sy lrtemplate ny tonian-dahatsoratra.
Adobe Lightroom Online - Trick video: